XAQIIQ: Maxi Allegri Oo Faah Faahin Dheeraad Ah Ka Bixiyay Sababtii Dhabta Ahayd Ee Uu Cristiano Ronaldo Ku Seegay Xafladii UEFA Iyo Waliba Aragtidii Ronaldo Ee Guushii Luka Modric. - GOOL24.NET
XAQIIQ: Maxi Allegri Oo Faah Faahin Dheeraad Ah Ka Bixiyay Sababtii Dhabta Ahayd Ee Uu Cristiano Ronaldo Ku Seegay Xafladii UEFA Iyo Waliba Aragtidii Ronaldo Ee Guushii Luka Modric.
Kabtanka xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaan ka soo agwareegin xafladii abaal marinaha UEFA ee xalay ka dhacday magaalada Monaco ee sidoo kale lagu samaynayay isku aadka UEFA Champions League waxaana hore u soo baxay warar sheegayay in Ronaldo uu xafladan ku seegay kadib markii uu ka cadhooday in aanu ku guulaysan abaal marinta xidiga sanadka ee Yurub ugu fiican.
Haddaba tababaraha kooxda Juventus ee Massimiliano Allegri ayaa ugu danbayn faah faahin buuxda ka bixiyay sababta dhabta ahayd ee uu Ronaldo ku seegay xafladii abaal marinaha UEFA iyo waliba dareenka xidiga ree Portugal ee in aanu ku guulaysan abaal marinta xidiga sanadka ee Yurub ugu fiican.
Massimiliano Allegri ayaa si rasmi ah u shaaciyay in Cristiano Ronaldo uu go’aankiisa ku diiday in uu ka soo qayb galo xafladii abaal marinaha UEFA ee Monaco kadib markii uu ogaaday in Luka Modric uu ku guulaystay abaal marinta xidiga sanadka ee Yurub ugu fiican wuxuuna Allegri xaqiijiyay in Ronaldo uu si wayn uga niyadjabay arintan.
Luka Modric ayaa cod aqlabiyad ah oo 313 ah ku garaacay Cristaino Ronaldo kaas oo helay 233 dhibcood laakiin inkasta oo farqiga dhibcaha Modric iyo Ronaldo uu si wayn u kala sareeyo haddana Ronaldo ayaa isku arkayay in uu Modric uga qalmay abaal marintan.
Massimiliano Allegri oo ka hadlaya qaabkii uu Ronaldo uga niyadjabay in aanu ku guulaysan abaal marinta xidiga Yurub ee uu Modric ku guulaystay ayaa yidhi: “Isagu wuu cadhaysan yahay oo uu niyadjabsan yahay. Isagu kamuu qayb galin xafladii Montecarlo ee shalay isla markaana waxa uu ahaa go’aankiisa shaqsiga ah”.
Laakiin Maxi Allegri ayaa dhinaca kale tilmaamay in Ronaldo uu u qalmay ku guulaysiga abaal marintan kadib wixii uu Champions League ka soo qabtay xili ciyaareedkii hore wuxuuna yidhi: “Ronaldo wuu dhiiro gashan yahay. Isagu waxa uu ahaa gool dhaliyihii ugu fiicnaa Champions League ee xili ciyaareedkii hore, wuxuuna ka fikirayay in uu u qalmay abaal marinta”.
Massimiliano Allegri ayaa intaa kadib ka hadlay in Ronaldo uu hadda diirada saari doono kooxdiisa Juventus wuxuuna yidhi: “May dhicin, hadda waxa uu diirada saarayaa Juve”. Modric ayaa markale Ronaldo iyo xidigaha kale ee Yurub kula tartami doona abaal marinta FIFA ee The Best iyo waliba Ballon d’Or.
Hadalka Massimiliano Allegri ayaa si dhab ah u xaqiijiyay warar badan oo ay warbaahintu qoraysay tan iyo xalay kuwaas oo sheegayay in Ronaldo uu xalfadii UEFA ku seegay cadho uu ka qaaday in aanu abaal marinta xidiga sanadka ee Yurub ku guulaysan taas oo aan ahayn markii ugu horaysay balse waxa uu hore u seegay xaflado abaal marino FIFA qabtay waqtiyadii uu Messi ku guulaystay abaal marinta Ballon d’Or.
Wakiilka Ronaldo ee Jorge Mendes ayaa hore UEFA ugu weeraray in aanu Ronaldo ku guulaysan abaal marinta xidiga sanadka ee Yurub ugu fiican waxaana hadalkiisii ka mid ahaa: “KUbbada cagta waxaa loogu kala guulaystaa garoonka isla markaana halkaas ayaa ah halka uu Cristiano ku guulaystay”.
Mendes ayaa hadalkiisa sii raaciyay: “Waxa uu soo dhaliyay 15 gool, dhabarkiisa ayuu Real Madrid ku qaaday si ay markale u qabsadaan Champions League, waa doqoniimo ceeb ah, guulaysataha wax shaki ahi kuma jiro maadama oo uu Ronaldo booskiisa ugu fiican yahay”.